MediaLight Mk2 Dimmable A19 बल्ब - MediaLight बायस प्रकाश
घर MediaLight Mk2 Dimmable A19 बल्ब
बचत $ 13.00 बचत $ 13.00
product.variants.choose_variant एकल / E26 / 110v -। 29.95 एकल / E27 / 220v -। 29.95 --प्याक / E6 / 26v - 110 १169.95..XNUMX --प्याक / E6 / 27v - 220 १169.95..XNUMX --प्याक / E12 / 26v - 110 १309.95..XNUMX --प्याक / E12 / 27v - 220 १309.95..XNUMX
एकल 6-Pack 12-Pack पैक
E26 / 110v E27 / 220v भोल्टेज
मिडियालाइट बल्ब एसएमपीटीई मानक एसटी २०2080०-:: २०१ '' मूल्या HD्कन एचडीटीभी छविहरूका लागि सन्दर्भ हेर्ने वातावरण 'को अनुपालन गर्न डिजाइन गरिएको हो।
अल्ट्रा हाई सीआरआई र सिन्युलेटेड डी 65 रंगीन तापमान विशेषता ल्याबबाट कलग्रेड एमके २ चिपको सुविधा प्रदान गर्दै। अस्पष्ट मिडियालाइट Mk2 ले तपाईंको होम थियेटरको लागि अवधारणाको सटीकता प्रदान गर्दछ र तपाईंको ग्रेडिंग सूटमा उत्तम थप छ।
उच्च सटीकता 6500K सीसीटी (संबंधित रंग र Color्ग तापमान)
रंग रेन्डरिंग सूचकांक (CRI) ≥ Ra Ra रा (TLCI) 98)
रंग स्थिर डिमि stable र तत्काल वार्मअप
ल्युटर्न डिमर्सका लागि अनुकूलित *
Wat वाट ११० एसी H० हर्ट्ज
° am किरण कोण
MediaLight Mk2 बल्ब कुनै साधारण बल्ब हो। यो एक सस्तो सीओबी प्रकाश स्रोत को उपयोग गर्दैन। यो ३२ व्यक्तिगत Colorgrade Mk32 चिप्स (१ मी MediaLight Mk2 ग्रहण भन्दा बढी, तर समान वर्णक्रमीय शक्ति वितरण संग) र, COB lightbulbs को विपरीत, यो लक्ष्य रंग तापमान सम्म पुग्न १५ मिनेट सम्म को आवश्यकता पर्दैन। यो के हो हामी तत्काल वार्मअप द्वारा मतलब छ।
मिडियालाइट बल्ब अधिकांश बल्बहरू भन्दा भिन्न रूपमा निर्माण गरिएको छ र तपाईंको अवस्थित डिम्मरको साथ बिभिन्न रूपमा कार्य गर्दछ। It लुटरन एलईडी डिमर्सको लागि अप्टिमाइज गरिएको छ किनभने उनीहरूले ट्रिम समायोजन स्विच प्रदान गर्दछ जुन डिमिमि range दायराको पूर्ण र सही नियन्त्रणको लागि अनुमति दिन्छ। र राम्रो समाचार यो छ कि ल्युट्रॉन डिमर्स एकदम उचित मूल्यको छ। धेरै जसो केसहरूमा अन्य डिम्मरहरू मात्र ठीक हुन्छन्, तर तपाईले निम्न मुद्दाहरूलाई याद गर्न सक्नुहुन्छ:
डिमिनिंग दायराको सानो रकम (सामान्यतया -०-70 ०% दायरा बनाम १००% भ्यालुकाइको साथ)। यो कम वा उच्च रूपमा जान सक्दैन।
एलईडी बल्ब सब भन्दा कम डिम्म सेटिंगमा बन्द हुन सक्दैन: यो डिम्मर सोचको कारणले हो जुन बल्ब पूर्ण रूपमा बन्द छ किनकि एक एलईडी खपत हुने वाट्याजको कम मात्राको कारण हो।
एक्स १० वा पावर लाइन क्यारियर (पीएलसी) नियन्त्रण टेक्नोलोजीमा आधारित डिमिming प्रणालीहरूमा, लाइनमा पावरमा साना उतार चढावका कारण मोड्युलहरू सञ्चार गर्दा एलईडी झिलमिल हुन सक्दछ।
यो सुझाव दिइन्छ कि तपाईंले आफ्नो हालको डिमर्स जाँच गर्नका लागि कि उनीहरूले मिडियालाइट बल्बहरूसँग काम गरे जुन तपाईंले किन्नुभयो। संभावना छ कि तिनीहरू ठीक काम गर्नेछन्। यदि होईन भने, तल सूचीबद्ध डिमर खरीद गरेर समस्या समाधान हुनेछ:
लेभिसन TTI06-1 एनजी
साथै कुनै पनि लुटरन केसटा डिमर्स। जब सम्म कम-अन्त ट्रिम हुन्छ, यसले अस्थिरता वा कम सेटिंग्समा अचानक ड्रप-अफ बिना कार्य गर्दछ।
5.0 17 समीक्षाहरूमा आधारित
एकल / E26 / 110v
डोनाल्ड टी। नागले जूनियर
एक ठोस उत्पादन बाट महान प्रदर्शन।
म Mpur2 बल्ब Ipurchased को प्रदर्शन संग पुरा तरिकाले सन्तुष्ट छु। पढ्ने र टेलिभिजन हेर्ने धेरै रमाइलो र आराम छन्। रंगहरु अधिक संतृप्त बिना र अधिक जीवन्त छन् र पाठ आँखा को तनाव बिना पढ्न सजिलो छ। अत्यधिक आँखा बुढेसकाल को लागी सिफारिश गरीएको छ।
यो उपयोगी थियो? 1 0
A19 बल्बहरु सही छन् र सबै कुरा जुन म MediaLight बाट अपेक्षा गर्न आएको छु
उत्कृष्ट, तर मलाई अधिक बहुमुखी प्रतिभा चाहिन्छ
म कुनै पनि ताराहरु टाढा लिईरहेको छैन किनकि उत्पादनले के भन्छ, राम्रो छ। जे होस्, शायद एक भविष्य बल्ब संस्करण एक हार्डवेयर dimmer, ala ह्यू र अन्य बल्ब को आवश्यकता बिना dimmed गर्न सक्षम हुनेछ। एक अनुप्रयोग र/वा आवाज सहायकहरु संग टाई गर्न को लागी राम्रो हुनेछ। साथै, द्वि-रंग विकल्प छ राम्रो हुनेछ। मलाई थाहा छ बजार यस उद्देश्य को लागी हो यो बारे मा परवाह छैन, तर म जस्तै कोहि जो एक सामान्य जीवन वातावरण मा यो कार्यक्षमता र रंग सटीकता मिश्रण गर्न चाहन्छ, यो महत्वपूर्ण छ। यो 6500 मा स्विच गर्न को लागी राम्रो हुनेछ जब सम्पादन, तब केहि अरु सबै चीज को लागी केहि न्यानो, अनुप्रयोग र/वा आवाज सहायक को माध्यम बाट बसेको स्थिति बाट मंद गर्न को लागी क्षमता संग।
यो उपयोगी थियो?20
मलाई यी बत्तीहरु मन पर्छ!
मैले यी लिएको छु जब मँ थोरै अतिरिक्त प्रकाश मेरो Medialight MkII पूर्वाग्रह प्रकाश को पूरक गर्न चाहन्छु। उत्पादनहरु सबै राम्रो गरीएको छ, स्थापना गर्न को लागी सजिलो छ, र एक उचित मूल्य को लागी उच्च गुणवत्ता को प्रकाश - सबै शानदार ग्राहक सेवा संग। मँ धेरै प्राप्त गर्दैछु र अत्यधिक उनीहरुलाई सिफारिश गर्दछु!